Ogaden News Agency (ONA) – Soomaaliya oo Digniin ka soo saartay weerarada Internet-ka
Soomaaliya oo Digniin ka soo saartay weerarada Internet-ka
Posted by Wariye Qaran	/ May 18, 2017
Wasaaradda Boostada, Isgaadhsiinta iyo Teknoolijiyada Xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay war ka soo saartay weerarada dhinaca Internet-ka ah ee lagu qaaday ilaa 150 dal, taas oo ay xustay in uu xataa saameyn karo Soomaaliya.
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Boostada, Isrgaadhsiinta iyo Teknoolijiyada ayaa shacabka uga digay khatarta Virus-ka ku sii fidaya Adduunka uu leeyahay.
Waxaa lagu tilmaamay in Virus-kan uu yahay kii ugu saameynta badnaa, kaasoo gaadhay ilaa 150 dal oo dunida. Meelaha laga soo sheegay Virus-ka ee ugu dhow Soomaaliya ayaa kamid ah dalka Kenya oo deris la ah, sida lagu sheegay warkan ay dawlada Soomaaliya soo saartay.
Weerarkan Virus-ka wuxuu aalaaba ku faafaa dhinaca Email-ka, wuxuuna kaa xidhayaa Computer-ka, iyadoo lagu weydiisanayo inaad bixiso lacag madax furasho ah (Ransom), si laguugu furo. Waxaa warka qoraalka lagu sheegay inay suura gal tahay in Soomaali badan ay ku dhacaan dabinkaan, sidaas darteed waxaa lagu baaqay in laga digtoonaado.